Turkiga oo 15,000 oo shaqaale waxbarasho ah shaqada ka joojiyay kadib inqilaabkii fashilmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTurkiga oo 15,000 oo shaqaale waxbarasho ah shaqada ka joojiyay kadib inqilaabkii fashilmay
July 19, 2016 Puntland Mirror World 0
Macalin Turki ah oo arday cashar u sharaxaya fasal gudihiis.
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa mamnuucay 15,000 oo shaqaale waxbarasho ah kadib inqilaabkii fashilmay asbuucii lasoo dhaafay.
Wasaarada waxbarashada Turkiga ayaa ku eedaysay in ay xiriir la leeyihiin wadaadka fadhigiisu yahay Maraykanka Fethullah Gulen oo Turkiga aaminsanyahay inuu abaabulay inqilaabkii fashilmay.
Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa wacad ku maray in ay qaadayaan ficil ka dhan ah taageerayaasha Fethullah Gulen.
“Waan ka xumahay, laakiin ururkan argagixisada ah kama sii jiri doono dalna,” RW turkiga ayaa sidaa yiri.
Dhanka kale, dowlada Turkiga ayaa dhawaan dowlada Soomaaliya ku amartay in ay dalka ay ka saarto haayada Nile Academy oo lala xiriiriyo in ay leeyihiin taageerayaasha Fethullah Gulen.
Boqolaal arday Soomaali ah ayay saamayn ku yeelatay kuwaasoo ku sugan Turkiga iyo Muqdisho oo ay waxbarashadooda gacanta ku haysay haayada Nile academy.
April 9, 2017 Ugu yaraan 21 qof oo ku geeriyooday qarax ka dhacay kaniisad kutaala magaalada Tana ee dalka Masar
July 25, 2016 Safaarada Turkiga Muqdisho oo la wareegaysa shaqadii haayada Nile Academy oo dalka laga saaray